Sidee loo qaabeeyaa Nidaamyada Howlgalka GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Ku habee GNU / Linux adoo adeegsanaya Grub Customizer
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala GNU / Linux ayaa leh caqabada tusaale ahaanshaqsiyeed Marka laga reebo u adeegsiga ujeedada gaarka ah ee ay ugu doorteen inuu yahay Nidaamka Howlgalka, inaad awood u yeelato inaad kala habeyso Distro-gaaga sida ugu macquulsan si ay u muujiso sida ay u noqon karto waxqabad iyo awood badan Nidaamka Howlgal ee Bilaashka ah kuwa gaarka ah.
Distro kasta wuxuu leeyahay barnaamijyo iyo tabo u gaar ah oo u gaar ah oo loogu talagalay in loogu habeeyo habka ugu wax ku oolka iyo waxtarka badan laakiin waxaa jira kuwo badan oo caam ah oo laga helo bakhaarrada mid kasta oo ka mid ah. Daabacaaddan waxaan isku dayi doonaa inaan xusno oo sharraxno waxa ugu caansan uguna caansan dhammaan Distros, si loo taageero isticmaaleyaasha Software-ka Bilaashka ah iyo GNU / Linux World si loo gaaro himilooyinkooda ku-habboonaanta iyo u-habeynta waxyaabaha ay u kala diraan.
1 Habee GNU / Linux
1.2 Maamulaha Plymouth / DEBIAN Plymouth
1.3 Maareeyayaasha Soo Gal
1.4 Maareeyayaasha Daaqadaha
Habee GNU / Linux
Ka mid ah Codsiyada Shakhsiyeynta waxaan ka helnaa:
Es interface garaaf ah oo noo oggolaaneysa inaan maamulno menus-ka boot-ka ee GRUB2 / BURG Nidaamka GNU / Linux Operating Systems. Waxaa abuuray Daniel Richter hadda socda 5.0.8 version waxayna ku taal gudaha en Launchpad. Codsigan ayaa noo oggolaanaya, iyo waxyaabo kale:
Si aad u guurto, tirtir ama dib u beddel magaca diiwaanada kabaha ee 'GRUB menu',
Tafatir waxyaabaha ku jira liiska ama samee diiwaanno cusub oo boot ah,
Ku orod Maareeyaha Boot dib u rakibidda Diiwaanka Boot Master (MBR),
U habeeyso Nidaamka Howlgalka ee caadiga ah si uu ugu socdo bilowga,
Maamul halbeegyada nudaha qaarkood,
Tafatir sawirka asalka GRUB iyo badhanka midabada qoraalka.
Barnaamijyo isku mid ah ama la mid ah: Bilowga, KGRUBEtifaftiraha y SuperBootManager.
Maamulaha Plymouth / DEBIAN Plymouth
Plymouth waa barnaamij kale oo loogu talagalay Maareynta bilowga Nidaamka Howlgalka oo diiradda lagu saaray bixinta qaab muuqaal ah bilowga Nidaamka Howlgalka, taas oo ah, u oggolaaneysa soo bandhigida animation ama muuqaal ah, halkii ay ka ahaan laheyd qaabka qoraalka (muujinta farriimaha bilowga) taasi waa soo bandhigayaa marka kombiyuutarku bilaabmayo.
Nidaamyada qaarkood sida Ubuntu ama Mint waxaa lagu rakibay si caadi ah, kuwa kalena maahan, sida DEBIAN. Plymouth waa barnaamij terminal ah iyo DEBIAN Plymouth Manager waa weji garaaf ah oo loogu talagalay Plymouth dhalasho ahaan Distro MX-Linux 17.
Codsigan ayaa noo oggolaanaya, iyo waxyaabo kale:
Ku rakib / masax Mawduucyada
Beddel mawduuca Splash ee hadda jira.
Waxaa loo isticmaali karaa qunsuliyada (Plymouth) iyo / ama iyada oo la adeegsanayo jawi garaaf ah (DEBIAN Plymouth Manager) si loogu fuliyo falalka kor ku xusan.
Barnaamijyo isku mid ah ama la mid ah: Maamulaha Plymouth
Maareeyayaasha Soo Gal
Maareeyayaasha Muuqaalka (Maareeyaha Muuqaalka / DM) sidoo kale loo yaqaan maareeyayaasha soo galitaanka, waa codsiyo leh muuqaallo muuqaal ah oo muujinaya dhammaadka hawsha boot-ka ee Nidaamka Howlgalka GNU / Linux, halkii laga isticmaali lahaa qolofkiisa caadiga ah, oo badanaa oggolaanaya soo gelitaanka Isticmaalaha Nidaamka.
Xilligan nidaamka deegaanka ee Distros GNU / Linux wuxuu leeyahay beddello wanaagsan oo ballaaran oo loogu talagalay Maareeyayaasha Shaashadda. Maaddaama kala duwanaanshahoodu u ballaadhan yahay kan maareeyayaasha daaqadda iyo bay'adaha desktop-ka.
Maamulayaashan badiyaa waxay bixiyaan shahaado cayiman oo loo habeyn karo iyo helitaanka mawduucyada badankoodna waa la qaabeeyaa ama la hagaajiyaa iyada oo loo marayo terminal ama konsole wax ka beddelka feylasha qaabeynta.
Kuwa ugu waaweyn, kuwa ugu badan ee la isticmaalo loona yaqaan waxaa ka mid ah:
Qaar ka mid ah waxay leeyihiin, sida LightDM, codsiyo qaabeysan oo u oggolaanaya wax-qabadkooda. Wixii LightDM ah ayaa jira "LightDM / lightdm-gtk-greeter-settings GTK + interface" Waxay leedahay 4 qaybood oo shaqo ah oo fududeynaya qaabeynta shaashadda Soo-dhaweynta iyo walxaha ay ka midka yihiin:
Muuqaal: Mowduuca, Icon, Font, Waraaqda iyo Sawirka Isticmaalaha.
Guddi: Wigdets ee Waqtiga, Taariikhda, Luqadda, iyo Helitaanka, Fadhiga iyo Liiska Awooda.
Meesha Daaqadda: Si loo dajiyo daaqadda uu adeegsaduhu iska diiwaangaliyo oo uu ku galo.
Kale: Kuu ogolaanayaa inaad u qaabeeyso barnaamijyada marin u helka ee Maareeyaha Shaashadda iyo xuduudaha ilaalinta Awoodda Shaashadda.
Kuwa kale sida KDM ama SDDM oo loo maro qeybta guud ee guud ee loo yaqaan 'Desktop Environment' waa la qaabeyn karaa.
Nidaamka Muuqaalka Nidaamka Howlgalka Daaqadda
Maareeyayaasha Daaqadaha Iyagu waa barnaamijyadaas oo shaqadoodu tahay inay tusaan daaqadaha garaafyada ee barnaamijyada lagu rakibay Nidaamka Howlgalka ee isticmaalaha, si ay si fudud ula falgeli karaan.
Sidaa darteed, nidaam hawleed kasta oo garaaf ah wuxuu la yimaadaa Maareeyaha Daaqadda kaas oo badanaa laxiriira Deegaanka Desktop-ka (GNOME, KDE, Plasma, XFCE, LXDE, iyo kuwa kale) si loo abuuro saamaynta garaafka iyo Windows-ka Nidaamka.
Waxaa ka mid ah Maareeyayaasha Daaqadaha ee sida weyn loo isticmaalo loona yaqaan:
Waxyaabaha sida yar loo yaqaan loona isticmaalo waxaa ka mid ah:
Mid kastaa wuxuu leeyahay aalado u gaar ah oo qaabeynta ah oo u oggolaan doona deegaanka loo yaqaan 'Desktop Environment' in lagu arko qaab u gaar ah iyo mid shaqsiyeed, si isticmaale kasta u yeelan karo Distro shakhsi ahaaneed ugu badnaan!
Ugu dambeyntii, si loo habeeyo GNU / Linux Distro waxaan ka faa'iideysan karnaa Conkys illaa Maamulaha ConKy ama xoogaa deked ah, adoo kala dooranaya Docky, AWN, Qaahira Dock ama kuwa kale ee aad doorbideyso.
Tan waxaan ku habeyn karnaa oo aan ku hagaajin karnaa Nidaamkeena Hawlgalka GNU / Linux.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee loo qaabeeyaa Nidaamyada Howlgalka GNU / Linux?
Mashiinka Godot: Mashiinka Muuqaalka Muuqaalka Sawirka wuxuu Muujinayaa Dembi Qofka Saddexaad